Ukuchithwa kwemitha yeoksijini yemetro abavelisi - China iMveliso yeZinyibilikisi zeOxygen zemitha kunye nabathengisi
I-DOG-2092 inexabiso elikhethekileyo ngenxa yemisebenzi eyenziwe lula kwisiseko sokusebenza okuqinisekisiweyo. Umboniso ocacileyo, ukusebenza okulula kunye nokulinganisa okuphezulu kunika ukusebenza kweendleko eziphezulu. Ingasetyenziselwa ngokubanzi ukubek'esweni ngokuqhubekayo kwexabiso leoksijini elinyibilikisiweyo lesisombululo kwizityalo zamandla obushushu, isichumisi semichiza, isinyithi, ukhuselo lokusingqongileyo, ikhemesti, ubunjineli bemichiza, ukutya, amanzi abalekayo kunye namanye amashishini amaninzi. Inokuxhotyiswa nge-DOG-209F Polarographic Electrode kwaye inokwenza umlinganiso wenqanaba le-ppm.
I-DOG-2082X yeemitha ze-Oxygen Meter
Izixhobo zisetyenziselwa unyango lwamanzi amdaka, amanzi acocekileyo, amanzi okubilisa amanzi, amanzi aphezu komhlaba, i-electroplate, i-elektron, ishishini leekhemikhali, ikhemesti, inkqubo yokuvelisa ukutya, ukubeka iliso kwindalo esingqongileyo, ukwenziwa kwebhiya, ukubila njl.
I-DOG-2082S ymitha ye-Oxygen yeMitha yedijithali